“wixii aan dalka u qabanayno waanu qorsheynaa,” Madaxweyne Biixi | Berberanews.com
Home WARARKA “wixii aan dalka u qabanayno waanu qorsheynaa,” Madaxweyne Biixi
Harasheekh-(Berberanews)-Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo la hadlay dadweynaha magaalada Hara-sheekh ayaa sheegay in waxqabadka xukuummadiisa uu salka ku hayo qorshe sanadeed ee aanu ahayn laab la kac.
“Xukumaddayadan joogtaa dhawr waxyaabood ayaanan lahayn: Gole ka fuul ma lihin oo inta kuu yimaado oo sidaas iyo sidaas aad tidhaahdo lagu yidhaahdo haye, ma karno taas oo meel walba intaan dhagax dhigno maya, oo ma karayno taas.”ayuu yidhi Mr Biixi.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay inay xukuumadda u qorsheysantahay waxkasta oo dalka loo qabanayaa sanadkasta, “Laakiin wixii aan dalka u qabanayno waanu qorsheynaa, dalkoo dhan baa la eegaa sannadkii markaa wixii la qabanayaa way qorsheysan yihiin.”
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in sannadkan waxabadka xukuumadda ee Hara-Sheekh ay ugu jirto dhismaha MCH cusub.
“Harasheek MCH casriya in loo dhiso qorsheha wasaaradda caafimaadka ee sannadkan waa ku jirtaa. Haday la raageena markan tago way iman doonan oo way bilaabi doonaan.”
Halkan ka daawo khudbada Madaxweynaha Somaliland.
Previous articleWasiirka Gaadiidka Somaliland oo ku bushaareeyay dhismaha wadada Oodweyne iyo Burco
Next articleXogta: Azerbajain oo qabsatay 20 tuulo